Home Somali News Nigeria: Madaxweynaha cusub Muhamadu Buhari oo Isbedal ku baaqay!
Hogaamiyaha Mucaaridka dalka Nigeria ayaa ku guuleystay doorashada Madaxweynaha, waxaa sidaa saaka oo Arbaca ah xaqiijiyey guddiga doorashada.
Muhamadu Buhari ayaa helay 2.5 milyan codod ka badan kuwii uu helay Madaxweynaha xilka haya Goodluck Jonathan.
Buhari ayaa ku guuleystay 21 gobal oo kamid ah dalka Nigeria, halka Madaxweyne Jonathan uu ku guuleystay 15 oo kaliya.
Madaxweynaha xilka ka degaya ayaa durbadiiba shalay gelinkii danbe wacay Buhari ugu hanbalyeeyey guusha, kahor intaan si rasmi ah loogu dhawaaqin cida guusha raacday.
Madaxweynaha cusub ee la doortay ayaa saaka (Arbaca) khubadii ugu horeysay oo uu uga hadlay guushiisa ku sheegay in uu doonayo in dib u heshiisiin loo sameeyo ummada reer Niigeria, wuxuuna balan qaaday inuu fulin doono isbedalkii uu balan qaaday.
Muhamadu Buhari oo isagu ah nin kasoo jeeda deegaanada waqooyi ee Muslimiinta Nigeria, ayaa ololihiisa ku galay inuu wax ka qaban doono amniga gaar ahaan Boko Xaraam, Musuq Maasuqa iyo Dhaqaalaha dalka Nigeria.
Hogaamiyaha xilka qabanaya ayaa 3 goor oo hore u tartamay xilka Madaxweynaha, wuxuuna sidoo kale horey uga soo taliyey dalka Nigeria 1984tii muddo kooban oo uu inqilaab militari ku qabsaday kahor intaan isna inqilaab xilka looga xayuubin 20 bilood kadib.
Waxaa lagu xasuustaa xiligii Buhari uu inqilaabka ku heystay dalka Nigeria inuu si adag ulla dagaalamay musuq maasuqa, waxaana astaan u ahaan jirtay ciqaabta uu marin jiray shaqaalaha dowlada markii ay shaqada kasoo daahaan.
Muhamadu Buhari ayaa bishii July ee sanadkii hore ka badbaaday weerar bambaano oo ay la beegsadeen kooxda Boko Xaram xili uu safar ku marayey waqooyiga dalkaasi. Buhari ayaa isagu kamid ah siyaasiyiin horey ugu baaqay in waqooyiga Nigeria lagu dhaqo shariicada Islaamka.
Doorashada dalka Nigeria ayaa ahmiyad ulleh qaarad afrika maadaama dalkaasi uu yahay kan ugu dadka badan qaarada, waana markii ugu horeysay oo uu mucaaridka dalkaasi si doorasho ah xilka kala wareego Madaxweyne xilka haya.
Somaliland: Madaxda Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Oo Soo Af-Jartay Khilaafkii Ka Taagnaa Doorashooyinka Goleyaasha Wakiillada Iyo Deegaanka
Somaliland: Dahabshiil Bank oo u Soo Xidhay Tababar Muddo Saddex Cisho ah u Socday Shaqaalihiisa Hargeisa